यी १३ देश जसको स्वास्थ्य सेवा विश्वकै उत्कृष्ट छ
हामीले आज विश्वमै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा दिने देशहरुको सुची बनाएका छौ । ‘द लेगाटम इन्सिट्युट’, लण्डनमा रहेको यो अनुसन्धान इन्सिट्युटले आफ्नो १० औ वार्षिक ग्लोबल प्रोस्पेरिटी इन्डेक्स, एउटा ठुलो सर्वे सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सर्वेलाई आधार मानेर विश्वकै उत्कृष्ट स्वास्थ सेवा दिने देशहरुको सुची सार्वजनिक गरिएको थियो ।
उक्त संस्थाले १०४ वटा भेरिएबलहरुलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको थियो । त्यसमध्ये नौ वटा सह–इन्डेक्सहरु रहेका थिए । यो अध्ययनमा सुची तयार पर्दा प्रमुख तत्व ‘कुन देशका नागरिक कति स्वस्थ छन्’ रहेको थियो । स्वास्थ्यलाई प्रमुख तीन तत्वका आधारमा मापन गरिएको थियो । जसमा देशको आधारभुत मानसिक र शारिरीक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संरचना र रोकथाम र उपचारका लागि उपलब्ध सामाग्रीहरु रहेका थिए ।
१३. क्यानडाः सन् १९८४ मा क्यानडाले हेल्थ सम्बन्धि कानुन पास गर्यो जसमा सुलभ र फ्रिममा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरालाई प्रमुखताका साथ राखिएको थियो । जसलाई मेडिकेयरको नामले पनि बुझिन्छ । क्यानडाको स्वास्थ्य सेवा राम्रो नभएतापनि पछिल्लो समय भने यसले निकै सुधार गरेको मानिन्छ ।
५. स्वीडेन–गुणस्तर जीवन र स्वास्थ्य सेवामा स्वीडेनले सबैभन्दा धेरै अंक पाउन सफल रहेको छ । यो देशका नागरिकको औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा धेरै औसत आयु हुने देशको सुचीको चौथो स्थानमा स्वीडेन रहेको छ ।